FBS ရဲ့ ၂၄/၇ အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီ
သင်forex အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ေပြေနဲ့့ သက်တောင့်သက်သာအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်စေရန် FBSက ဆန္ဒရှိပါသည်. ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင် မှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ တစ်ပတ်မှာ ၇ရက်, တစ်ရက်မှာ ၂၄နာရီ အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အဆင်သင့်ရှိပါသည်.့ မေးစရာရှိလာပါက အချိန်မဆွဲဘဲ FBS အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ထံတိုက်ရိုက် သွားရောက်မေးမြန်းပြီး သင့်ရဲ့ပြသနာများကို အချိန်မီဖြေရှင်း/အဖြေရှာပါ. ယခုအချိန်မှာတော့ , အင်္ဂလိပ်လိုသာမေးမြန်းအကူအညီတောင်းနိုင်သေးပြီး, မကြာမီ အခြားဘာသာစကားဖြင့်ပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်.
မည်သည်မေးခွန်းကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့့၏ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အကောင်းဆုံးအဖြေတွေ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ သင်ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးပါမည်. သင့်တွင်ရှိသမျှ အခက်အခဲကိစ္စအဝဝကို မခြွင်းမချန်နဲ့့ တုံးဆိုင်းမနေမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. နည်းပညာအခက်အခဲနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာသိလိုသမျှကိုမေးမြန်းပြီး သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်နဲ့ငွေကို မပြုန်းတီးအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.
ပြီတော့ ဒါလေးကို အမြဲသတိရပေးပါ, FBS သည်သင့်ရဲ့ဘက်မှာ သင်နဲ့အတူအမြဲရှိနေပါတယ်!